WordPress NiceAdmin ngwa mgbakwunye Version 1.0.0 wepụtara | Martech Zone
Sunday, Eprel 8, 2007 Wednesday, July 4, 2007 Douglas Karr
Mgbe otu afọ nke na-achọ na WordPress nhazi ọrụ interface, M na-na-na-na-ike gwụrụ ya. Alpsh huru ikwu m na blog ozo ma were obi oma zitere m ihe ntinye aka nke WordPress nke onye ozo mebere. M gbanwere ngwa mgbakwunye na-eji eserese sitere na weebụsaịtị WordPress wee wuo usoro nchịkwa ọhụụ ọhụrụ. Nke a bụ nseta ihuenyo:
Ọ naghị agbanwe ọrụ ma ọ bụ arụmọrụ nke WordPress ọ bụla, ọ na-eme ka ọ dị ntakịrị mfe ile anya! Nwere olileanya na ọ masịrị gị!
Special ekele aga Sean karịrị na Geek na laptọọpụ. Sean nwere ezigbo anya maka ihe nchọgharị CSS ya mere, achọrọ m enyemaka ya iji dozie usoro ndị ahụ tupu ịhapụ ya. Daalụ, Sean!
Budata WordPress ngwa mgbakwunye site na Project Page
Maka ndị gị niile na blọọgụ WordPress, enwere m ekele maka ị nweta okwu na nke a na nke ọzọ Projects. Dị ka ọ dị na mbụ, ọ bụrụ na edepụtara trackback gị, agbanweela m nofollow ka ị nwee ike nweta otuto maka njikọ a! Daalụ!
Ọ bụ m obi ụtọ na-enyere si na nke a plugin na ka ihe na-aga n'ihu, M ga-eme ihe ọzọ na-arụ ọrụ na ya dị ka mkpa.
Nke a dị oke mma ga-eji ya!
Ezi ọrụ Doug. Anyị kwesịrị ịkpọ ya Extreme WordPress Makeover 🙂
Oke kwesịrị ime ọzọ, AL! Nke a na-agbanwe ọdịdị na mmetụta - mana ụbọchị kwesịrị ịdị nso na Admin nwere ike ịnwe skins na gburugburu na-enweghị mkpa ngwa mgbakwunye!
Ikekwe isiokwu nchịkwa kwesịrị ịbụ admin.css na ndekọ isiokwu ka ndị ọrụ nwee ike ịkwado ha ọnụ!
Nnukwu ọrụ n'ebe ahụ Doug.. N'eziokwu, ike gwụrụ m ọnwụ nke ịhụ otu panel admin ugboro ugboro ..
Ihe kacha mma bụ na ọ na-ejigide ọrụ ahụ mgbe ọ na-agbanwe naanị ụdị ahụ .. Naanị ihe m chọrọ. 😀
Hụrụ ihu ọhụrụ n'anya. Achọpụtara otu nsogbu n'agbanyeghị. Ihuenyo Ngosi/ Isiokwu Editọ adịghị mma. Window koodu pere mpe maka iji. Ọ dị obere ka thumbnail ga-adị.
Ị nwere ike izitere m nseta ihuenyo yana ihe OS/Nchọgharị ị na-agba?
Ga-ezitere gị nseta ihuenyo. Iji xphome 5.1.2600 Ọrụ ngwugwu 2 wuo 2600 na IE 7. ?
Emere m faịlụ pdf nke screendump. M ga-ezigara gị tinye ya ma ọ bụrụ na m nwere ike ịhụ ihe mgbakwunye email gị.
Nke ahụ bụ okwu nzuzu n'ezie! Ọ na-egosi na nha font ahụ gara na nha 1 ma ọ bụ 2 px. Ọbụna mgbe m kwụsịrị ya na css, anaghị m enweta nsonaazụ ziri ezi. Arrgh, IE!!!
(PS: Gaa Firefox!) 🙂
Eziokwu mara, anaghị m eji ihuenyo ahụ dezie faịlụ agbanyeghị. M na-eme ya na mpaghara wee ftp ya elu. Ma ọ dị m mkpa ka m mee ka ị mara banyere ya.
Enwere ike ịchọta ihuenyo ebe a:
Nke a dị mma. Ahụghị m ihe onye nrụpụta nke ọzọ mere, mana nke a dị mma.
Daalụ maka nkwupụta ahụ 🙂
Ahụrụ m nchịkọta isiokwu a n'anya, ọkachamara nke ukwuu. Ana m etinye ya na blọọgụ 8 niile, na-eme ka ọ bụrụ ngwa mgbakwunye ọkọlọtọ maka ndị ahịa blọọgụ m.
Matt @ Ntinye Host.com
Dịka ihe Ross kwuru, a na m enwekwa otu nsogbu na IE7+WinXPSP2.
Mozilla dị mma.
Ọ na-adị ka nke ochie. Kedu ihe ị gbanwere na template iji mee ka ọ baa uru karị? Ọ nwere ihe ọ bụla kpalitere mgbanwe?
Mgbanwe ndị ahụ niile bụ mma, Thor. Ụdị mkpụrụedemede na ụdị dị ntakịrị mfe na anya. Ọ ga-amasị m ịfegharị na idegharị ihe ntinye mana oge anọghị n'akụkụ m. 🙂
A ga-enwe ndozi maka IE n'oge adịghị anya? Igbe isiokwu-nhazi dị ntakịrị.
Ọkt 6, 2007 na 7:08 AM
Agbakwunyere obere ndozi maka WordPress 2.3.
Jenụwarị 12, 2008, elekere 9:12 nke abalị
Ahụrụ nkwupụta ndị a site na azụ n'April, echere m na achọtara m otu okwu nha nha "thumbnail" ahụ yana edemede edezi…